किन आउदैछन अमेरिकी नौसेना प्रमुख ह्यारी नेपाल ? - Kantipath.com
किन आउदैछन अमेरिकी नौसेना प्रमुख ह्यारी नेपाल ?
काठमाडौं – अमेरिकी नौसेना (नेभी) प्रमुख ह्यारी बिन्क्ले ह्यारिस आइतबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। अमेरिकी नौसेना का एडमाइरल ह्यारिस अमेरिकी सेनाको प्रभावशाली प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर हुन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
अमेरिकाले नेपाली सेनासँग रणनीतिक सहकार्यलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। समय—समयमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने गरेका छन्। भारतपछि नेपालले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको मुलुक अमेरिका हो। ‘चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने रणनीति अपनाउँदै आएको छ। अमेरिकी नौसेनाका प्रमुखको भ्रमणलाई यस हिसाबले निकै महत्वको छ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने।
चिनियाँ रक्षामन्त्री नेपाल आउँदै : अमेरिकी नौसेना प्रमुखको भ्रमण लगत्तै चिनियाँ रक्षामन्त्री चङ् वानछुन नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम नागिलाले रक्षामन्त्री खाँणको निमन्त्रणामा चिनियाँ रक्षामन्त्री चैत १० मा नेपाल आउन लागेको बताए। ‘यो विशुद्ध शिष्टाचार भ्रमण हो’ उनले भने ‘चीन र नेपालबीचको रक्षा सहकार्यबारे भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ।’
भारतीय प्रधानसेनापति नेपाल आउने : भारतीय प्रधानसेनापति विपिन रावत चैत दोश्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। उनी गत डिसेम्बर अन्तिम साता प्रधानसेनापति नियुक्त भएयता पहिलो नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्। मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी ग्रहण गर्न उनी यहाँ आउन लागेका हुन्। नेपाल र भारतमा नयाँ प्रधानसेनापति नियुक्ती भएपछि एक अर्को देशमा मानार्थ प्रधानसेनापति लिन जाने प्रचलन छ।
Previous Previous post: मिटर उल्टो घुमाएर अनधिकृतरुपमा रकम असुल्ने प्राधिकरणका कर्मचारी थुनामा राख्ने आदेस
Next Next post: २० महिना अवधिमा ६ लाखभन्दा बढी युवा खाडी मुलकमा